Ndị fọdụrụ n'ezinụlọ ụgbọ okporo ígwè njem na ụwa dị nnọọ ogologo! Ndị a njem nwere ike na-a ọtụtụ ụbọchị na-ekpuchi ọtụtụ puku kilomita.
Nke a njem na njem site Southeast Asia si Bangkok na Singapore. The train stops at River Kwai and Kuala Kangsar. Oge njem ahụ bụ 3 ma ọ bụ 4 ụbọchị. Ọzọkwa, njem na-emekarị iri ebe na ngwụsị izu. Ọzọkwa, ebeobibi bụ onwe na omume ọma mma. N'ihi na ulo bụ kọmpat ọ na-kacha mma ruru eru maka solo njem.
Na mbụ, e nweghị WiFi a transcontinental njem. Ya mere, -akwadebe na-eji oge na-achọ na ebe ndị mara mma. n'ihi na ugwu, ọhịa, na ndị ọzọ na Canadian odida obodo ị ga-ahụ bụ breathtaking. The njem na-amalite na Vancouver na-agwụ na Toronto. Enwe ala sleeper ụgbọala, ebe ị ga-esi mata otú munsu, mgbada, na ọbụna agba.
Nke a fọdụrụ n'ezinụlọ ụgbọ okporo ígwè na njem atụmatụ ndị fọdụrụ n'ezinụlọ gbatia nke ogologo ụgbọ okporo ígwè na ụwa. Firstly, Njem na-na-enweta obosara nke Australia. Ọzọkwa, ihe ndị mara mma gụnyere waterfalls, ọhịa, na acha anụnụ anụnụ. N'ihi na nke ogologo ya, na e nwere ọtụtụ isi na-akwụsị a ụzọ. The stops include Broken Hill, Adelaide, Barossa Valley, Kalgoorlie, Cook, na Rawlinna. Train Tickets n'ihi na nke a na njem bụ oké ọnụ na ahịa na-amalite na-elekọta $600.
Ka a na ụgbọ okporo ígwè bụ ndị fọdụrụ n'ezinụlọ trans-European route it only takes 2 ụbọchị iji wuchaa. The ụgbọ okporo ígwè doo si French isi obodo wee rute n'isi obodo Russia. N'ihi na nke a na njem aga site Belarus ị ga-mkpa a Belarus visa njem. Ọzọkwa, ị chọrọ visa ịbanye Russia.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, wee pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Flongest-train-journeys-world%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)